Raha misy virus ny kaonty Facebook-nao – Hery Dev – reloaded
Oktobra 3, 2016 hery Fanoroana
Amin’ny maha fitaovana be mpampiasa ny kaonty Facebook dia betsaka ihany koa ireo fanafihana mety hihatra aminy. Ny tanjona matetika dia ny hahafahana mangalatra ny kaontinao na koa hahafahana manaparitaka bibikely na virus. Indro ara atolotra amin’ity lahatsoratra ity hoe ahoana no fomba fanalàna ireny bibikely ireny. Fa mialoha izany, ny fanafody tsara indrindra dia ny fiarovana. Aza maimaika manindry sary eny amin’ny rindrina, indrindra sary vetaveta. Aza maika manokatra video na dia avy amin’ny namanao akaiky aza. Aleo anontaniana foana ilay olona mandefa hafatra. Ary raha sendra manindry sary na video dia aza maika ny miditra lalina. Ny akamaroan’ny video sy sary tena izy mantsy dia vao tsindrina dia misokatra ny sary. Raha ohatra mbola tsy ilay sary no misokatra fa fanontaniana na fangatahana fanamarinana (confirmation) dia efa tsy izy intsony izay.
Toa izao ara ny dingana fanalàna an’ireny virus ireny. Raha tsy mahavaha olana ny dingana iray dia mirosoa amin’ny dingana manaraka.
Ovay ny tenimiafina (mot de passe)
Ny zavatra voalohany atao rehefa sendra misy ahiahy hoe misy tafiditra ny kaontinao dia ny fanovàna ny tenimiafina. Rehefa manova tenimiafina dia mangataka i Facebook hoe hidina avokoa ve ny fitaovana mbola misokatra, dia ekena. Izany hoe raha mbola misy fitaovana misokatra mampiasa ny tenimiafina teo aloha any dia tapaka ka tsy maintsy mampiditra ilay tenimiafina vaovao indray.
Hidio ny “sessions” mbola misokatsokatra
Tsara atao matetika ny mijery ireo sessions misokatra. Io no hahitana hoe toerana aiza sy aiza no mampiasa ny compte facebook-nao. Raha olona hafa noho ianao no mampiasa facebook dia mety hoe nanana tenimiafina izy dia miditra. Mila hidina izany ny sessions mbola misokatra.
Mandehana ao amin’ny paramètres -> sécurité -> sessions actives na jereo eto avy hatrany.
Hamarino ireo “applications” tafiditra ao amin’ny facebook
Matetika koa misy applications nekenao hamoaka zavatra amin’ny anaranao ao amin’ny Facebook. Jereo ny lisitry ny Applications ao amin’ny Facebook dia esory izay ahiahiana ho manaparitaka virus amin’olona.
Mandehana ao amin’ny paramètres -> applications. na jereo eto avy hatrany.
Esory ny “extensions” ao amin’ny Chrome na Firefox izay mety manembatsembana
Raha efa natao daholo ireo zavatra telo eo ambony ireo nefa mbola manaparitaka virus ihany ny kaontinao dia tsy ao amin’ny Facebook intsony ny olana fa efa ao amin’ny ordinateur mihitsy. Koa ny voalohany indrindra atao dia esorina ny “extensions” amin’ny “navigateur” ampiasainao (toa ny Chrome na Firefox na Internet explorer).
Mandehana ao amin’ny menu an’ilay navigateur (Chrome na Firefox) dia ao amin’ny gestion d’extensions dia esory na désactiver-o izay tsy azonao antoka.
Raha efa nataonao daholo ireo ambony ireo nefa mbola tsy misy fiovàna dia efa tena ao amin’ny ordinatera-nao mihitsy ilay virus. Ka mila ampiasainao ny anti-virus-nao hanadiovana ny ordinateur.
Raha mila fanazavana fanampiny dia mametraha hevitra na manontania eto ambany.
Facebook Fanoroana Virus